Ukukhangela iMveliso Eyona Miphumo Enqabileyo Yokucocela Iivili Zamavili?
Disemba 30, 2018 Novemba 10, 2018 by admin@opskar.com
Sonke sithanda indlela esetyenziswe kuyo Iimfumi ezikhanyayo zijonge imoto entsha.
Ukugcina iirhasi zikhangele indlela efanelekileyo yokusebenzisa efanelekileyo yokucoca u nga fumana.
I-OPS isebenza kanzima ukudala phezulu kwimiba yokucoca uluhlu, kwaye sicinga ivili lethu lesondo
I-Self-Clean Powder yinto efanelekileyo kakhulu yokuhlambulula amasondo emoto.
Ngokungafani nomzimba wemoto, izibonda zayo zivezwe kwezinye zeemeko ezinzima kakhulu apho.
I-OPS ijonga iindlela zokuhambisa ixabiso, kwaye ufumane umsebenzi ngokufanelekileyo kubaxhasi bethu.
I-Ring Ring I-Self Self-Clean Powder enye yeyona ndlela ifanelekileyo yokucoca iifomula zikhoyo,
kwaye sifuna ukuba ufumane into enokuyenza ngayo.
I-Ring Ring I-Self-Clean Powder Ifumana Umsebenzi Owenziweyo!
Ukucoca iivili ezinqwelomoya akufuneki kube nzima.
I-Powder iyona ndlela ehamba phambili yokuhambisa isondo ukuhlambulula amasondo emoto kuba isebenza ngokukhawuleza,
ngoko akudingeki. Ukuhlambulula kwethu umsila ukusetyenziswa. Mxube nje ngamanzi,
uze uyisebenzise kumavili akho angcolileyo.
Akunandaba nokuba uzama ukucocebisa i-oli yexesha elide, ukutshaya uthuli, okanye ukubola, i-Steel Ring Self Self-Clean Powder
iya kunqumla umonakalo, ngoko iivili zakho zikhanya njengoko ziphuma embonini ngosuku!
Emva kokuba i-chrom ehlambulukileyo yokuhlambuluka ihleli kumavili ngeembalwa ezimbalwa, vele uhlambe ngamanzi.
Unokuphosa iivili ukuba ufuna, kodwa mhlawumbi ziya kubonakala zimangalisa ngaphandle komsebenzi.
Enkulu malunga neenkcukacha
Ukuba uyimoto echaza ubungcali, uyazi ukuba kunzima kangakanani ukufumana imoto yeemoto ezikhangeleka kakhulu.
Uninzi lwabaxumi bethu ngabaqeqeshi, yingakho asiyiko ukuthetha ukuba i-Self Self-Clean Powder
iyona nto ibhetele yokuhamba ngevili esinevili.
Siyazi ukuba abathengi bethu badinga ukusebenza kakhulu ngexabiso eliphantsi, kwaye iimpendulo zethu ngeevili ziNsimbi
I-Ring Self Self-Clean Powder. Zonke iimveliso zethu zenza imoto ilula, kwaye yenza ukuba usebenze ngaphezulu ngexesha elingaphantsi.
I-OPS ilapha ukwenza ukuba kwenzeke
Sithengisa igumbi lokuhlambulula isondo kubo bobabini nabathengi.
Ukuba unomdla ekufundeni okungakumbi malunga nohlobo lwethu lwemveliso yokucoca imoto,
nceda usinike umnxeba kwi-86-18657634288. Ukuba ungathanda ukuthumela i-imeyile, nqakraza apha, okanye ulandele ikhonkco ngasentla kwiwebhusayithi yethu,
apho ungahlola yonke imveliso esiyivelisayo.
iindidi Iivili Zamavili AcocekileyoUshiye uluvo
Fumana iiNkonzo zokuLondolozwa kweeMoto eziMnandi
Julayi 6, 2019 Septemba 21, 2018 by admin@opskar.com
Ngaba ucinga ukuba ukuhlamba imoto izinto ezilula? Akukho mfuneko yokuhlamba kuqala kunye nesiponji isula!
Xa usela ikofi kwithuba elithile, ukucoca imoto kuyasebenza!
Ukuthenga imoto esemgangathweni kwakufuneka kube lula. Siye saqulunqa i powder yemoto ehlamba ixabiso,
kwaye unikezela ukusebenza kwikhompyutha.
I-right car car wash powder iyimfihlelo yokufumana umphumo wengcali xa kubalulekile. Apha apha kwi-OPS, sinikeza ezinye zazo i-powder powder ukuba imali ingathenga. Sichitha ixesha sithetha nabaxumi bethu,
ukwenzela ukuba ifomu yethu ifaneleke kakhulu kwiintlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa.
Kukho isizathu sokuba baninzi abantu bathemba ukuhlamba iimoto kubaqeqeshi okanye bakhethe ukusebenzisa i-self-service car washing
izitishi. Iziphumo zithetha zona. I-OPS idlulisela umkhiqizo wethu kuwo wonke umhlaba, ngoko sinako ukuthetha nabo
ukuzithemba ukuba i-powder yethu yokuhlamba imoto iya kufumana umsebenzi.
Indlela Yokuhlamba Imoto Yenkunkuma Yokucoceka Eco-friendly?
Yiyiphi i-OPS yeyona mveliso ecocekileyo yokucoca imoto?
IiNkonzo zeeNqwelo zeeNgcaciso zeeNqwelo kwiOPS
Ukuba ungumoto ohlamba ubugcisa, uyazi ukuba abantu beza kuwe ukuhlamba imoto ephezulu.
Siyazi ukuba ixesha lakho lixabisekileyo kwaye abathengi bakho bakunika enye yezinto zabo ezixabisekileyo.
yethu I-powder yokuhlamba imoto iklanyelwe ukuba ingachukumisi, ngoko uyayifakisha, kwaye uqhubeke usebenza. Kuya kutshabalalisa
Izinto ezinzima ezifana nomthi womthi, ngaphandle komonakalo kwengubo ecacileyo. Emva kokuba i-powder yokuhlamba imoto yenza umsebenzi wayo,
I-OPS yokuCoca iCarling yenza iNgqiqo
Siphinde sinikeze enye yeyona mpahla yokuhlamba imoto kwi-market xabiso. Iqela lethu lokuthengisa liyonwabile
ukudibanisa nawe kwaye uthethe malunga nendlela iimveliso zethu ezinokwenza ngayo umahluko kwi shishini lakho.
Isiqingatha sekhilomitha yethu yokuhlamba imoto inokuhlambulula ngaphezu kweemoto ze-40!
Imveliso yokucoca i-OPS ithetha inzuzo eninzi kwi-investment encinci kwimpahla yokuhlamba imoto oyifunayo
athenge. Ukuba ufuna ukufunda okungakumbi malunga nezinto zokunakekela imoto ye-OPS onokukwenza, silapha ukunceda.
Ukuba u khangela Indlela efanelekileyo yokuhlamba imoto ngaphandle kokutshiza, ndiyacela Qhagamshelana nathi.
iindidi Iindlela zokuGcina iiMoto eziPhezulu15 Comments